Varume vanodawo kuti mukadzi upote uchimbomukwirawo kana kumuudza kuti ndirikuda kuiswa! | Nhau Dzevakuru
Home Ask Tete Varume vanodawo kuti mukadzi upote uchimbomukwirawo kana kumuudza kuti ndirikuda kuiswa!
Varume vanodawo kuti mukadzi upote uchimbomukwirawo kana kumuudza kuti ndirikuda kuiswa!
Varume vanodawo kuti iwe mukadzi upote uchimbomukwirawo kana kummudza kuti ndirikuda kuiswa! Kana murume akaneta musana ndoitawo sei? Kuneta musana zvinoreva kuti murume haasi kugona basa pabonde. Anonetsa kukwezva. Anoona mukadzi wake semunhu akangomirira kubika nekuwacha nekurera vana nekutsvaira mumba, pasinawo umwe muripo unganzi haa nhasi mukadzi anakirwa nemurume wake.
Chokutanga tsvaka chikonzero chirikuitisa murume ave nehusimbe pakusvirana. Usahwande, mubudire pachena kuti zviri kufamba sei asi usapopote.
Kana wawana nguva yokutaura naye tanga nekumurondedzera nyaya yekuti unomuda chose. Kana anzwisisa ipapo chirondedzera kuti zviri kukurwadza kugara nemunhu waunoda kudai mumba asi achigara ari kure newe. Rondedzera kuti kunzi mukadzi wemumba zvinoreva kuti chimwe chikuru chinangwa chemukadzi kuratidzwa rudo nemurume wako zvinova zvinosvika kumubhedha sekuti kana kamwe chete hako pazuva zvimwewo kaviri kana katatu unongoda. Asi wanga wakamirira nguva yese iyi hausi kunyatsoona kuti murume wako ari kufungei.
Kana anzwisisa mukumbire kuti pane chaanodawo kubvunza here kana kutsanangura nekuti pamwe iyewo anenge achitoti iwe ndiwe unofanira kutanga nyaya iyi kuti zviitike. Saka rega ataurewo mafungiro ake. Iwe terera wakanyarara kusvika apedza.
Chinzwisisanai kuti dambudziko riri papi. Kana murume achitombomira mboro dzimwe nguva, zvinoreva kuti anokwanisa kugaromira uye kurara newe. Asi kune varume vanodawo kuti iwe mukadzi upote uchiratidza kuda kuiswa chose uye kutanga nyaya pamunonorara. Hazvirevi kuti unotaura kuti ndoda kuiswa. Unokwanisa kuudza murume chiito chaunoita kana uchida kuiswa. Kana angoziva ega anoti akaona chiito ichi ofanomirira.
Koitazve varume vanodawo kuti iwe mukadzi upote uchimbomukwirawo. Iye anokumisira mboro iwe wochishandisa wega iye achiyevedzwa nokuona zvauri kuita.
Previous articleMinnie Mlungwana, H0TTEST BABEZ ON SOCIAL MEDIA – PICTURES
Next articleTete: Ndakamuka ndikaona sister yangu achiyamwa chinhu changu, ndikatunda!